रविलामिछाने आजको बिसेश रिपोर्टको साथ लाइब हेर्नुहोस भिडियो सहित (हेर्नुहोस लाइब) – पुरा पढ्नुहोस्……
रविलामिछाने आजको बिसेश रिपोर्टको साथ लाइब हेर्नुहोस भिडियो सहित (हेर्नुहोस लाइब)
आजको बिसेष कार्यक्रम सिधकुरा जनतासंग गंगामाया अधिकारीको बिसयालाई उठान , एउटा बद्सला को बिशेस रिपोर्ट तेस्तै अरु धेरै बिषय समेटियको जानकारी रवि लामिछाने ले दियका हेर्नुहोस तलको भिडियो लाईब ‘….
काठमाडौं । छोराका हत्यारालाई कारबाही गर्नुपर्ने मागसहित १३ वर्षदेखि सत्याग्रहमा रहेकी गंगामाया अधिकारी अहिले वीर अस्पतालको दोस्रो तला, ७ नम्बर क्याविनमा अनशनरत छिन् । अवस्था साह्रै नाजुक भइसकेको छ ।
डा. सहनीले त्यही बेला अहिले कस्तो छ त, भनि सोधे ? गंगामायाले आफुलाई निकै अफ्ठ्यारो भएको सुनाईन् । उनले भनिन्, ‘खुट्टा पोलिरहेको छ । शरीर पूरै दुखिरहेको छ । मलाई अब मर्न दिनुस् ।
औषधि नदिनुस् ।’ डाक्टरसँगकै सम्वादमा गंगामाया भक्कानिएर रोइन, हामीले प्रश्न सोध्ने आँट गर्न सकेनौँ । उनले आफै बेलिविस्तारमा भनिन् । पूरै समय उनी रोएरै बोलिन् ।
मलाई सजिलै मर्न दिए हुन्थ्यो भनिरहेकी उनले एउटा इच्चा भने व्यक्ति गरिन् । उनले भनिन्, ‘सबै मिडियाहरु आए । तर, रवि लामिछाने भन्ने नाम सुनेको छु ।
म धेरै पटक सम्पर्कमा आउन खोजे । अहिलेसम्म भएन । रवि लामिछानेसँग कुरा गर्ने इच्छा छ । यदि उनी आउन सक्दैनन् भने म उनले जहाँ बोलाउँछन् । त्यहीँ जान्थे ।’ उनले यो पनि भनिन्, ‘डरले नआएका हुन् कि ।
उनलाई पनि डर होला ।’ गंगामाया उठ्न त सक्दिनन् । तर, रवि लामिछानेले जहाँ बोलायो त्यही पुग्छु, भन्नुले, उनी या सर्वोच्च अदालत भन्दामाथि कुनै न्यायायल भए त्यहाँको ढोका ढक्ढकाउन चाहन्थिन् वा अझै न्याय मूर्तिहरुलाई बिउँझाउने आवाजको खोजिमा छन् भन्ने बुझिन्छ ।
उनको आवाज उहील्यै दविसकेको छ । श्रीमान् नन्दप्रसाद अधिकारीको निधन अघिनै । उनलको श्रीमान्कै मृत्यु समेत अहिलेसम्म वेवारीसे छ । अस्पतालले मृत्युको घोषणा गरेपनि अन्तिम संस्कार नभएकाले नन्दप्रसादको मृत्यु वेवारीसे छ ।
गंगामायाको गुनासो नयाँ छैन । यही पूरानै हो । अपराधिलाई खोजेर दिँदापनि दण्ड दिन नसक्ने ? उनले प्रश्न गरिन् । अनि मलाई दुई चम्मा पानी खुवाउने ? मलाई अरुले जस्तै खाना खान मन लाग्छ, उनले अगाडि भनिन्, ‘तर, न्याय नपाएसम्म म कसरी साधारण जीवनमाफर्किऔँ । कि त न्याय मर्‍यो नै भनिदिनु पर्‍यो । कि मलाई सजिलै मर्न दिनु पर्‍यो । मलाई यसरी थुनेर राखिएको छ । ता कि म उल्टै कैद सजाय भोगिरहेको छुँ ।’-
हेर्नुहोस पत्रकार रबिलामिछ्लेको लाइब भिडियो
Prevनेपाली सेनाले देखायो टुडिखेलमा घोडे जात्रामा घोडाको यस्तो अनौठो कौशल (भिडियो सहित)
सबैले नेपालीले हेर्नुहोला.. पुरै शरीर नचल्ने बिक्रम भेट्न अमेरिकाबाट ८० बर्षिय बुबा आए,बिक्रमको अब’स्था देखेर रुवा’बासी (भिडियो सहित)
निशान खड्का हत्याको अर्को रहस्य खुल्यो …
नायक जीवन लुइँटेलको अमेरिकाबाट भाʼवुक सन्देश ( भिडियो सहित )